Waa maxay saddexda suuq ee waaweyn ee alaabada carbide tungsten hadda? Qaybaha adag ee adag waxay qabsadaan baabuurta, caafimaadka, suuqa tamarta cusub, ma aaminsan tahay? Ma ogtahay Fadlan aan maanta kuu soo bandhigo. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybta gawaarida. Kadib qaabeynta, xoqida, birta ama dahaarka ...
Iibinta ayaa Lagu Gaadhay Heer Sare abidkii 2015
In 2015, wajahay cadaadiska sii kordhaya ee hoos u dhaca dhaqaalaha iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha alaabta ceyriinka iyo waxyaabo kale oo taban, Nanchang Cemented Carbide LLC ayaa horay u sameeyay midnimo, mana uusan ka waaban mana uusan ka jawaabin kuwa kale inay raadiyaan horumar. Gudaha, waxay kor u qaadday maamulka iyo q ...
Iibinta Shirkadu Way Kordhaysay Mar Kasta Oo Looga Soo Horjeedo Baahida Taagta Daran Qeybta Koowaad Ee Sanadkan
Tan iyo bilowgii 2014, qiimaha alaabada ceeriin ee tungsten waa la sii waday hoos, xaaladda suuqa waxay ku jirtaa xaalad mugdi ah iyadoon loo eegin suuqa gudaha ama suuqa dibedda, dalabku aad ayuu u liitaa. Warshadaha oo dhami waxay u muuqdaan inay yihiin jiilaal qabow. Isagoo wajahaya xaaladda halista ah ee suuqa, t ...
Siyaasadda Macdanta Isku dhaca
Nanchang Cemented Carbide LLC (NCC) waa mid ka mid ah shirkadaha hormoodka ka ah garoonka Tungsten Carbide ee dalka Shiinaha. Waxaan diirada saareynaa soo saarida wax soo saarka Tungsten. Bishii Luulyo 2010, Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu saxiixay "Dodd-Frank Wall Street Reform iyo Xeerka Ilaalinta Macaamiisha" oo ay ku jiraan qaybta 1502 (b) ee ...
Qalabka Carbide, Dhuxulada Dhamaadka Carbide Solid, Mashiinka Mashiinka, Qalabka Jarista Carbide, Cemented Carbide Endmill, Carbide Cemented,